Moto 360 Igwefoto mod maka Moto Z bụzi onye ọrụ | Akụkọ akụrụngwa
Izu a ụmụ okorobịa Motorola gosipụtara MotoZ2 Force Edition, yana Moto Mod nke na-enye anyị ohere ịdekọ n'akụkụ niile enwere ike, Moto 360 Camera. Izu ole na ole gara aga, anyị bipụtara onyonyo nke ụdị Mod ọhụrụ a nwere ike ịbụ maka ọnụ mbinye aka, ugbu a n'aka Lenovo, yana dịka anyị nwere ike ịhụ na vidiyo nke egosipụtara ọnụ ọhụụ ọhụrụ na mods dị ugbu a, ọ bụ kpọmkwem otu ihe. Newdị ọhụrụ a nwere ese foto abụọ na-eme ka anyị nwee ike ịmepụta vidiyo na ogo 4k yana ọsọ 24 fps.
Moto 360 Camer na-ejikọ n'otu ụzọ ahụ dị ka ụdị mods niile dị taa, ọ dịkwa ole na ole, n'etiti ha ka anyị na-ahụ usoro mbugharị ngwa anya, batrị ọzọ, ụfọdụ ndị okwu JBL ... Mod dabara nke ọma na ama ya na ọ na-etolite otu mpempe akwụkwọ siri ike ma ọ bụghị oke oke, dịka mod doro anya họrọ. Moddị ọhụrụ a dakọtara na ụdị ọ bụla motorola Z. Dabere na ụlọ ọrụ ahụ, ụmụ okorobịa nọ na Motorola na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na ụdị njikọta ekwentị, ebe o doro anya ochicho ya di elu karie ka aturu anya.
Ọ kacha dị egwu na LG G5, otu n'ime ọdụ ụgbọelu modular mbụ kụrụ n'ahịa n'afọ gara aga na nke ahụ o mere n'enweghi mgbu ma ọ bụ otuto, Ọ bụ ihe kpatara Motorola iji meziwanye echiche ahụ wee hụ ka igwe ndị ị ga-esi tinye modulu bụ ezigbo echiche mana n'ụzọ dị iche karịa ụlọ ọrụ Korea zubere.
Ọhụrụ mod ka ịdekọ vidiyo na ogo 360 chọrọ sọftụwia pụrụ iche nke ga-adị n'oge na-adịghị anya, dịka mod a, nke a ga-akwụ ụgwọ $ 299 ma ga-aputa ahịa na August 10 na uwa dum.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Moto 360 Igwefoto igwefoto maka Moto Z bụzi gọọmentị
USB 3.2 ga-enye ohere ịnyefe data na ọsọ nke 20 Gbps
Android Pay dị ugbu a na Spain site n'aka BBVA